K/Galbeed oo beenisay in ay carqaladeeyeen kulamo looga hadlayay arimaha doorashooyinka - Tilmaan Media
Maamulka Koonfurgalbeed Soomaaliya ayaa beeniyay in ay carqaladeeyeen wadahadallo usocday wakiillo kasocda dowlad gobaleedyada iyo dowladda federaalka oo looga arrin sanayay arrimaha doorashooyinka dalka iyo sidii madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyadu ukulmi lahaayeen kahor inta guddiga doorashada madaxa banaan baarlamaanka hortagin.
Warar soo baxay ayaa sheegayay in kulamadaas fashilmeen kadib markii dowlad goboleedka Koonfurgalbeed iyo maamulka gobolka Banaadir ay sheegeen in aan loo baahnayn kulan dhex mara madaxda sare ee dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada. Arintaan ayaa ka xanaajisay dowlad goboleedka Puntland iyo Jubaland.
War saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa eedaymahaas ku tilmaamay kuwa been abuur ah. Waxaana lagu sheegay in wadahadalladu wali socdaan, guddiyaduna ka arrinasanayaan ajandaha iyo goobta uu kadhici doono shirka madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada.